काठमाडौँभित्रै नजिकै मन बहलाउने ठाउँको खोजीमा हुनुहुन्छ ? ठमेलको 'गार्डेन अफ ड्रिम्स' जानुहोस् ! (फोटो कथा)
ARCHIVE, COVER STORY, PHOTO FEATURE, POWER NEWS » काठमाडौँभित्रै नजिकै मन बहलाउने ठाउँको खोजीमा हुनुहुन्छ ? ठमेलको 'गार्डेन अफ ड्रिम्स' जानुहोस् ! (फोटो कथा)
काठमाडौँ- ठमेलको गार्डेन अफ ड्रिम्स । नाम जति मिठो छ, त्यति नै रमाइलो छ पूरै ठाउँ पनि । १०० रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति टिकट काटेपछि दिनभर घुम्न पाइन्छ गार्डेनमा । काठमाडौँको व्यस्त दैनिकी, र धुलाम्य सडकबाट केहि छुटकारा लिन चाहानेहरुका लागि यो ठाउँ निकै नै मनमोहक हुन सक्छ ।
यसो त उपत्यकामा रहेका नेपालीहरु र विदेशी पर्यटकहरुले पनि निकै रुचाएको ठाउँ हो यो । शुक्रबार गार्डेन अफ ड्रिम्समा अर्थ सरोकारकर्मीहरु पुग्दा वातावरण यस्तो थियो कि, 'काठमाडौँमा मन बहलाउने राम्रो विकल्प बन्न सक्छ यो ठाउँ ।'
पढ्नेहरु पढीरहेका छन् । ध्यान गर्नेहरु गरिरहेका छन् । प्रकृतिसंग रमाएर फोटो खिच्नेहरु त्यहि गरिरहेका छन् । के बालक, के वृद्ध सबै रमाईरहेका छन् । यसैक्रममा हाम्रो क्यामरामा कैद भएका केहि तस्विरहरु हेर्नुहोस ।